Sawirro: Bandhig Dacweed Cajiib Ah oo Lagusoo Bandhigay Magaalada Jilib Ee Jubbada Dhexe.
Saturday October 29, 2016 - 13:05:08 in Wararka by Super Admin
Bandhig cilmiyeedkan oo cinwaankiisu ahaa كن داعيا oo macnaheedu yahay noqo qof daaci ah ayaa si heer sare ah loogu soo bandhigay wilaayada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Jilib.
Bandhiggan oo sida loo soo bandhigay iyo dadaalka loo galay ay ka muuqatay fagaaraha Shahiid Bi’idnillaah Abu Jabal oo lagu qabtay bandhigga ayaa si aad ah usoo jiitay dadwaynihii faraha badnaa ee daawanayay.
Waxyaabaha lagu soo bandhigay oo aanan halkan kusoo koobi Karin waxa ka mid ahaa, khudbado,Gabayo, Anaashiid, Muxaadaraad, Matalaad ay samaynayeen qaar ka mid ah Mujaahidiintu, salaad tukasho, hal xidhaalayaa, su’aalo iyo qaar kale oo badan.
Dad badan oo aan la socon xaaladda Mujaahidiinta ayaa aaminsan in mujaahidiintu ay duurka kaliya ku nool yihiin oo ciriiri ay ku jiraan, hase yeeshee marka ay arkaan muuqaaladan cajiibka ah waxay ogaanayaan in goobaha ay mujaahidiintu ka taliyaan ay taallo diin, xorriyad, amni iyo nolol barwaaqo ah oo cabsi la’aan ay dadku nool yihiin.
Si kastaba ha ahaatee yaanan hadal kugu daaline indhahaaga ku qabowso oo kaga bogo sharafta muslimiinta wilaayaadku ay ku noolyihiin.
Ciidamada Mujaahidiinta oo dagaal kula wareegay degmada Balcad Sh/dhexe.